Ceni: “Tsy ady antsanga ny fampielezan-kevitra” | NewsMada
Ceni: “Tsy ady antsanga ny fampielezan-kevitra”
Raikitra ny fampielezan-kevitra, tsy miverina intsony… Tsy ady antsanga no atao, raha ny nambaran’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery.
“Tiako ny manoritra eto am-panombohana, tsy sanatria ady antsanga akory ny fampielezan-kevitra fa fiarahan’ny vahoaka mpifidy mandinika lalina: iza amin’ireo 36 mirotsa-kofidina no afaka hitondra an’i Madagasikara ho any amin’ny fandrosoana amin’ny dimy taona manaraka.”
Io ny fanambaran’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, tamin’ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra, omaly, amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Tanjona iaraha-mibanjina ny fifidianana mangarahara hanjakan’ny fahamarinana. Mba ny tena hevitry ny besinimaro tokoa no hahalany izay filoham-pirenena manaraka eo.
Koa miangavy ny rehetra mba ho tony ho tombontsoa ambonin’ny firenena ny Ceni. Aoka ireto zavatra telo ireto no hibahana ao an-tsaina sy ao am-po, araka ny nambarany: ny fitiavan-tanindrazana, ny fanajana ny soatoavina ary ny fanajana ireo lalàna manankery.
Manohy hatrany ny ezaka natombony ny Ceni
Manohy hatrany ny ezaka efa natombony ny Ceni. Efa nandritra ny fotoana naharitra izany, eo amin’ny fisokafana amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fiantohana ny fangaraharana amin’ny fifidianana ao anatin’ny fanajana ireo lalàna manankery.
Tsy miova amin’izay sori-dalana efa napetrany izay ny Ceni, na mialoha na mandritra na aorian’ny fifidianana. Izay ihany ny miantoka ny filaminana fototry ny fandrosoana maharitra ny tanindrazana. Tsy ho tratra ny tanjona raha tsy miray hina ny rehetra, ary samy mahatsiaro ho tomponandraikitra amin’ny anjara adidy eo amin’ny tsirairay ary.
Manomana sy mikarakara ny fifidianana ao anatin’ny fahitsiana sy ny fangaraharana àry ny Ceni. Tsy hitanila fa hampandroso ny fifidianana amim-pahitsiana ny fitondram-panjakana.
Hampita ny vaovao amin-kitsim-po sy amim-pahamatorana ny mpanao gazety. Hanohy hatrany ny ezaka efa natombony ny firaisamonina sivily: hitaiza, hanara-maso ary hanakiana ny tsy mety. Ho tena tomponandraikitra tokoa amin’izay lazainy sy ny ataony ny mpisehatra politika sy ireo kandidà mba hiantoka filaminana eto amin’ny firenena.